Chinhu Chinonhuwirira neWordPress Plug Kuyera & Ongororo | Martech Zone
Chinhu Chinonhuwirira neWordPress Plug Ratings & Ongororo
Muvhuro, Mbudzi 2, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kubatsira kune yakavhurika sosi kufamba kunogona kushamisa, asi vhiki ino yanga isiri imwe yenguva idzodzo. Isu tave tichipa kune iyo nharaunda yeWordPress kwemakumi gumi ikozvino. Isu takavaka zvisingaverengeke plugins. Vamwe vakarega basa, uye vamwe vane mukana unoshamisa. Yedu Mufananidzo Rotator Widget plugin, semuenzaniso, yakadzingwa pamusoro pe120,000 nguva uye iri kushanda pane anopfuura 10,000 WordPress masosi.
Imwe plugin yatakaisa mari mazana emaawa pairi CircuPress, email tsamba yemapepa takagadzira iyo WordPress. Iyo plugin yakanaka, ine hungwaru, ichibvumira vamiririri kuvaka email sezvavanogona kuita theme theme ... asi kutumira iyo email kuburikidza nebasa redu kuitira kuti tikwanise kubata tinya yekutevera, bounce manejimendi, vanyoreri, uye kunyorera. Zvinotorwa zvakati wandei basa rezvivakwa kuti izvi zviitike, asi isu tiri mazviri kwenguva refu. Tinotenda vashandisi veWordPress vanofanirwa kuve neyemuno email chikuva izvo zviri nyore kushandisa
Tichiri kukwirisa chikuva, hatina kubhadharisa munhu mumwe chete kuti aishandise - inotonhorera kana iwe ukandibvunza. Iko kunyoreswa kunopa yemahara vhezheni kana iwe ukatumira isingasvike zana maemail pamwedzi, asi isu takawedzera izvo apo isu tichichinja iyo yekubhadhara system ku WooCommerce uye shanda pane setup yeplatform kuti ive nyore kune vashandisi.
Kushamisika kwangu, takave neye--nyeredzi ongororo popup pane iyo Saiti yePakiji. Ini ndakabva ndatsamwa kuti ndione kuti chii chainge chakashata:
Saka… uyu mushandisi haana kumbobvira asaina asi akati izvo zvaifungirwa mukunyoresa kwedu maitiro. Ndakatorwa kushamisika kubva isu usanyatsokumbira ruzivo rwekadhi rechikwereti. Angadai akaona kuti kunze dai anga apedza kunyoresa, asi haana.
Ini ndaifunga izvi zvaive zvisina kuringana zvakakwana kuti zviunzwe kune Automattic, vachinyora yavo Plugin Tsigiro munhu:
Mhinduro yandakatambira yaishamisa kupfuura iyo ongororo pachayo. Ndakaenda ndichidzoka nemunhu kuAquattattic ndichiti saiti yedu yaitaridzika unyengeri nekuti hapana mitengo yakanyorwa pachena. Shady?
Ndakamuyeuchidza kuti isu Usabvunze Chero Kiredhiti Kadhi ruzivo usati waunza mitengo kumunhu. Uye kunyangwe zvakadaro hatina KUZVITADZIRA KUMASHURE ekubhadharisa edu ekutanga maanotora. Wati wambonyoresa sevhisi isingadhuri chinhu? Ndine chokwadi chekuti une… WordPress inokumbira kunyoreswa pasina ruzivo rwemutengo pane mamwe masevhisi. Shady?
Pasina kutaura kuti iyo Peji yemitengo yaitaurwa nezvayo mumaFAQs Yedu plugin. Panguva ino, ini ndakaburitsa iyo pricing page mune yedu menyu zvekuti panga pasina nyonganiso nemunhu, asi zvakadaro ndokumbira kuti ongororo ibviswe. Mhinduro:
Saka, mune mamwe mazwi, mumwe munhu akabvuma haana kumboshandisa basa redu inobvumidzwa kuyera sevhisi yedu neye 1-nyeredzi ongororo. Sezvo isu tiri kushanda kubatsira yakavhurika sosi nharaunda uye nekupa inodhura mhinduro, handina chokwadi kuti izvi zvinobatsira sei chero munhu. Uku ndiko kuongorora kwekunyepedzera - munyori anobvuma zvizere kuti haana kusaina kana kushandisa sevhisi yedu.
Ini ndaizonzwa zvakasiyana dai muongorori akanyoresa uye akatipa chiyero pane kugona kwe plugin - kunyangwe achiwedzera kuti aishuvira kuti mitengo yaive panzvimbo iyi ingadai yakave yakanaka. Asi ongororo-nyeredzi-yechimwe chinhu chaasina kumboshandisa haina chikonzero.
Gadziridza 11/2: Zvino ndiri vakatsamwa, mumwe hothead, zvisina musoro, mumwe jerk, kupenga, uye zvisina musoro nekuti ndakashatirwa kuti mumwe munhu asina kumboshandisa plugin akapa ongororo-nyeredzi, akatiza kuti basa redu raive risina kutendeka, uye kuti chero munhu akanyoresa aive pata. Basa ravasina kusaina.
Email yangu yaive pazasi, mhinduro yavo iri pamusoro.
Pamwe inguva yekuti ini ndingoita zvinoitwa nevamwe vanogadzira mapulagi izvo Matt uye timu iri paWordPress haifarire, uye kupfuura nekupa chero nguva nekuedza kudzoka kuWordPress uye ingotanga kutengesa plugins pane yangu saiti. Zviri pachena kuti havana hanya nevanhu vari kutsigira chikuva chavo.
Gadziridza 11/3: Nhasi, timu yekuzvipira paWordPress yakafunga kuti ndaida dzidzo mukushambadzira uye yakandipa zano rekuti ndive murume ari nani. Email yangu yaive pazasi, mhinduro yavo iri pamusoro.
Tags: mike epsteinWordpress plugin ratingsWordpress pluginswordpress ratings wongororo
Ini ndinobvumirana newe uye iyo yekuongorora system iri kuenda senge chipangamazano werwendo. Iko hakuna hunhu hwekusimbisa mutemo nezve ongororo sisitimu asi wongororo dzinoshandiswa senzvimbo yekutengesa kunyangwe zvigadzirwa / masevhisi asingashande sezvavanotaura kana iyo yekutyora rezinesi mutemo. Izvi hazvina kunaka uye hazvisi zvehunyanzvi. Kune zvakare akawanda ekunze ongororo / chiyero masisitimu asi iwe unogona kuramba yakaderera ratings.
Ini handitendi mumaresheni / ongororo nekuti iwo haatungamirirwe nemunhu akazvimiririra wechitatu uye haana chero zvitupa system (seiso kana zvakafanana).
Ini zvakare handitendi zvakanyanya mumisika senge envato kana yakafanana. Munguva yakapfuura ndakaendesa mamwe mateki (ini ndiri muimbi futi) uye haana kumbobvira agamuchirwa. Iye zvino ndiri kunyora mimhanzi yemamwe makambani emabhaisikopo.
Kune mamwe masisitimu anoita basa rakanaka rekuyananisa. Angie's List, semuenzaniso, inopa kontrakta mukana wekugadzirisa zvinhu uye kana zvakabvumiranwa pamwe chete sezvinogutsa, wongororo yakaipa inogona kugadziridzwa. Zvinosiririsa kuti wongororo iyi inomira - haipe kukosha kunharaunda uye inogona kungokuvadza kutorwa kweplugin yedu.
Nov 4, 2015 na10:06 PM
Huya kudivi rakasviba uye ugamuchire simba rekutengesa CMS, Doug! 🙂
Nov 5, 2015 na3:14 PM
Vanhu vanotsamwisa havangori munharaunda yakavhurika sosi.